Ngabe i- "Blockchain" ingasenza kanjani sikhululeke ngokwengeziwe? | Kusuka kuLinux
Ngabe i- "Blockchain" ingasenza kanjani sikhululeke ngokwengeziwe?
Luigys toro | | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ukuthi i-Intanethi iyisisekelo esiyisisekelo ekuthuthukisweni kwempucuko yabantu kusobala, kepha kubantu abafayo akulula kangako ukuqonda noma ukwazi ukuthi lolu shintsho lusho ukuthini ezimpilweni zethu.
Kumvelaphi yayo "inethiwekhi" yembulwa njenge- ithuba lokwehlisela ulwazi phansiNgamanye amagama, noma yimuphi umuntu emhlabeni onokufinyelela kwe-inthanethi angafinyelela imininingwane ethile ngokuchofoza amagundane ambalwa. Ngaphezu kwalokhu, umuntu ngamunye angaphindaphinda leyo mininingwane kaningi ngendlela afuna ngayo. Lokhu kwabizwa nge- Imininingwane Internet.
Le-Internet Yolwazi ibukeka inikezela ngefayela le- inkululeko enkulu kubantu emhlabeni wonke, i-priori, umqondo omuhle futhi ophelele. Kodwa-ke, ubunjalo bayo babuphethe ukuxubungula lezo zinzuzo ezazenzelwe zona. Incazelo yayo, i-Intanethi yinethiwekhi yamakhompiyutha yokudlulisa imininingwane. Iqiniso lokuthi kusekelwe ekusekelweni kwekhompyutha kusiphoqa ukuthi sibe nochungechunge lwezivumelwano ezibhalwe ngekhodi evumela ukusebenza kwayo. Ngokunjalo, uma inhloso yakho ukudlulisa imininingwane sidinga uchungechunge lwabahlinzeki balolo lwazi ukuze lube khona, futhi kulapha lapha lapho umbono wenkululeko nokwabiwa kwamandla ezindaweni ezithile wehla khona.
Amakhodi okwenziwe ngawo lezi zinqubo eshiwo ngenhla babengewona umthombo ovulekile, okungukuthi, umsebenzisi ongahleliwe akakwazanga ukufinyelela ikhodi esetshenzisiwe futhi ayisebenzise ukuze afinyelele ekusebenzeni okuthile okulungele izidingo zabo, uma kungenjalo babe nakho, futhi basenakho, lokho vumelana namakhodi izinkampani ezintathu noma ezine ezinkulu ezikunikeza zona. Ngamanye amagama, kufanele adlale umdlalo abamvumela ukuba awudlale, ngaleyo ndlela aqede ingxenye enkulu yaleyo nkululeko ebikade ilindelwe.
Ngakolunye uhlangothi, abadali bokuqukethwe nabo bathunjwa yisidingo sokusebenzisa amapulatifomu alaba bantu bamazwe amaningi ukukhombisa umsebenzi wabo, ukwamukela imibandela nezindleko ukuthi babeke.
Ngakho-ke, isimo esiye sabhekana neminyaka engu-25 edlule leso Ukwehliswa kwezikhundla okungelona iqiniso, ngoba empeleni yonke into izungeza ama-algorithms enziwe ngabambalwa. Uma kulokhu singeza ukuthi ukungaziwa, okuyisisekelo senkululeko, akunakwenzeka sisebenzise imigomo yamanje, sifinyelela esiphethweni sokuthi i-Intanethi ayizange iwenze kahle umsebenzi owawuyihlosile ekuqaleni.
Ebhekene nalesi simo njengenhlangano, siyibheka kanjena ngoba akwaziwa ukuthi ungubani noma ubunikazi bangempela, obubizwa ngoSatoshi Nakamoto wanquma ukudala ekupheleni kweminyaka eyishumi yokuqala yeminyaka eyinkulungwane umthetho Bitcoin, inethiwekhi "yontanga-kuya-kontanga" (inethiwekhi phakathi kontanga) evunyelwe ukudlula ukusetshenziswa komthombo ovulekile ukuthi uchungechunge lwama-node (amakhompyutha axhumeke kwinethiwekhi) abelana ngolwazi phakathi kwabo ngaphandle kokuba khona komzimba olawula ukuthengiselana okushiwo, okungukuthi, ukwabiwa emiphakathini. Ngokufanayo, lolo lwazi olwabiwe luzogcinwa emabhulokini ahlanganiswe ndawonye ngomsebenzi we-algorithmic. Kuzalwe iBlockchain.
Izici zobuchwepheshe ezimayelana ne- “blockchain"Banganikela ngezihloko eziningi ngakho-ke sizogxila kulokho lobu buchwepheshe obungasilethela khona.
Okokuqala, kufanele kwaziwe ukuthi ukuba ubuchwepheshe bususelwa kumthombo ovulekile Noma ngubani angathatha ikhodi ebhalwe ngaphambilini futhi ayiguqule noma ayandise ngendlela athanda ngayo, ngaleyo ndlela uthole uhlelo olusha oluhluke ngokuphelele kolokuqala. Ngalokhu, okufezwayo ngukuthi ukucutshungulwa kolwazi kunesisindo esikhulu kunokusekelwa okubhalwe kukho, yilokho esikubiza ngokuthi I-Intanethi yenani.
Le-Internet of Value yehlukile kwi-Internet of Information ikakhulukazi kulokho wathi imininingwane ayiguqukiNgamanye amagama, uma ingezwe kubhlokhi, ayikwazi ukukopishwa noma ukuguqulwa, futhi noma ngubani angayithola ngaphandle kokuqondiswa komzimba ophakathi. Uhlelo lweqiniso olusatshalaliswa. Kulokhu kufanele kungezwe ukuthi amakheli asetshenziselwa ukudlulisa imininingwane zibethelwe, lapho ukugcinwa kobunikazi bomsebenzisi kusebenza khona.
Zonke lezi zici ezinhle zibangele ukuthi ezinyangeni ezedlule ubuningi bamapulatifomu nezinkampani sethule ukwakha imikhiqizo yabo ngaphansi kokuvikelwa kwe-blockchain, kusuka kulabo abazinikele ekunikezeni ukusekelwa ngeziyalo ezahlukahlukene eziku-inthanethi ngisho nalezo ezivumelayo yenza ukuthengiselana kwebhange. Ngale ndlela, singalindela ukuthi esikhathini esizayo esiseduze kakhulu noma yimuphi umsebenzi esiwenzayo manje kwikhompyutha yethu uzosuselwa kulolu hlelo futhi uzokwenziwa ngenkonzo esebenzisa i-block chain njengokwesekwa, ngaleyo ndlela sigcine ukungaziwa kwethu, siqede abalamuli kanye nesiqinisekiso sokuthi ukusebenza kwethu kuzokwaziwa yibo bonke ngoba iBlockchain isuselwa ethembeni elibekwe phakathi kwamabili elingazani.
Kusewubuchwepheshe bokutholwa obudinga inqubo yokuvuthwa, kepha ikusasa ngelakho, ngaphandle kokuthi thina bantu silonakalise, njengoba senza ngakho konke okuhle esikutholayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ngabe i- "Blockchain" ingasenza kanjani sikhululeke ngokwengeziwe?
bheka le ndatshana engiyibhalile!
Kuyinto eyi-cryptocurrency engabizi kakhulu ukwedlula yonke ngoba i-BOINC isebenza kahle kakhulu ngemuva, ngokungafani nabanye abanjengoMonero ngokuphelele (futhi, ngamabomu) abhubhisa isilondolozi se-L3, okwenza umthelela nakumakhompyutha anamandla ube mkhulu kakhulu.
Ngikhohliwe i-athikili, haha.
victor soto kusho
futhi ngakho konke lokhu amabhange amakhulu awasoze amukela ama-cryptocurrensets, »alahlekelwe ukulawula kepha kanjani?
Phendula ku-victor soto
I-athikili enhle kakhulu, ngaphandle kokukhohlwa ubungozi bokungaziwa.
Iqiniso lokuthi libethelwe futhi alichazwanga kusinika umuzwa wokuphepha. Butooo, ingasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene.
Umbono wami ngokubukeka nokuzizwa kweLibreoffice II